MYU SHADAN: ဆုံရပ် ညှိမရ၍ KIO နှင့်အစိုးရ မဆွေးနွေးနိုင်သေး
KIA ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် အစိုးရ ဒု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော နှစ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များသည် တင်းမာနေသော စစ်ရေးကိစ္စများ ပြေလည်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြရန် အစီအစဉ်ရှိသော်လည်း နေရာရွေးချယ်မှု သဘောမတူ ကြသဖြင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရကြောင်း သိရသည်။
“ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဒီဇူလိုင်လမှ တွေ့ကြဖို့ ပြောခဲ့တာ ရှိတယ်။ သူတို့ ခေါ်လာမယ့် သူဟာ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဗန်းမော်မြို့မှာ တွေ့ဖို့ကမ်းလှမ်းတာမျိုး ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ဒီလိုမျိုး ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင် တင်းမာနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဗန်းမော်ကိုသွားပြီးတွေ့ဆုံဖို့ ဆိုတာ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိသေးဘူး၊ အဲဒီ အတွက်လည်း အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြောင်း ပြန်ထားတယ်” ဟု KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက KIO နှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့အကြား နှစ်ဘက် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အတွက် အကြိုညှိနှိုင်းမှုများ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
KIO ဘက်က မြန်မာအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကချင်ပြည်နယ် လွယ်ဂျယ်မြို့နယ် သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ် မြို့နယ်တို့ကို အဆိုပြုထားပြီး ယခုလ ၉ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း တွေ့ဆုံရန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် မူလက ပြောဆိုထားကြပြီး ဖြစ်သည်။
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များနှင့် KIO တို့အကြား တွေ့ဆုံခဲ့မှုများသည် နိုင်ငံရေးအရ တရားဝင် ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အနေ အထားသို့ ရောက်ရှိရန် ဝေးကွာနေကြောင်း၊ နှစ်ဘက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် အစိုးရက ထိုးစစ်ဆင် နေမှုများ လက်တွေ့တွင် လျှော့ချပြရန် လိုအပ်ကြောင်း KIO ဘက်က ပြောသည်။
“အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ပြီး ပြောဆိုတဲ့ အခါ အစဉ်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ယုံကြည်စရာ တခုမှ အဖြေ ထွက်မလာဘူး။ အခုထက်ထိ နားလည်နိုင်တဲ့ အဆင့် တဆင့်မှ မရှိသေးဘူး။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကျနော်တုိ့က အတွင်းဘက်ကို ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးမှုမှာ ပါဝင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ တချိန်ချိန် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးဖို့ လမ်းစ ရလာပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်နေရာကို မဆို လိုက်ပြီး တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်” ဟု ဦးလနန်က ဆိုသည်။
ယခုအခါ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် KIO လက်အောက်ခံ တပ်များနှင့် အစိုးရ တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲများ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေသကဲ့သို့ အစိုးရတပ် များကလည်း တပ်အင်အား၊ လက်နက် ခဲယမ်းနှင့် ရိက္ခာများ အဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းလျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရ လက်အောက်ခံ ခမရ ၃၈၇၊ ၄၃၈၊ ၆၀၁ တပ်ရင်းများက ယခုလ ၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ KIO ဗဟိုဌာနချုပ်၏ အနောက် ဘက် ရှေ့တန်း ကင်းစခန်းများကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသကဲ့သို့ ဒေါ့ဖုန်းယန် အခြေစိုက် အမြောက်တပ် များကလည်း ၁၂၀ မမ၊ ၁၀၅ မမ လက်နက်ကြီးများနှင့် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နှစ်ဘက် အသေအပျောက် စာရင်းများကိုမူ ထုတ်ပြန် နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း KIA စစ်မြေပြင် သတင်းများက ဆိုသည်။
ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က လားရှိုးမြို့နယ်မှတဆင့် နမ့်ခမ်းသို့ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် တပ်အင်အား အပြည့် သယ်ဆောင်လာသော အစိုးရ စစ်ကား ၇ စီးကို မူဆယ်မြို့နယ် စယ်လန့် ကျေးရွာအနီးတွင် KIA တပ်များက ကြားဖြတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ကား ၂ စီး ပျက်စီး သွားကြောင်း၊ အသေအပျောက်စာရင်း မသိရသေးကြောင်း KIO ဘက်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အစိုးရ စစ်တပ်မှ ၂ ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ သွားကြောင်း၊ ဒေသခံ ကားတစီးကို ချောဆွဲကာ မူဆယ် ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း မူဆယ်မြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပင် စယ်လန့် ကျေးရွာအတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီး ဒေသခံရွာသားများ မူဆယ်နှင့် နမ့်ခမ်း မြို့ပေါ်များသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း နမ့်ခမ်းမြို့ခံ စိုင်းမောဝ်လှိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ယနေ့တွင် မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ကားလမ်းကို ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားကြောင်းနှင့် မန်ဝိန်းကြီး ဒေသ အခြေစိုက် အစိုးရတပ်များက နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဘက်သို့ ချီတက်သွားကြောင်း ဒေသခံ မျက်မြင်များထံမှ သိရသည်။
တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးလနန်က “အခု အစိုးရတပ်တွေက စစ်ဆင်ရေးကို အမြဲမပြတ် လုပ်နေတယ်။ တဘက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး မီဒီယာတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ပြောဆိုနေ ပေမယ့်လည်း၊ ကျနော်တို့ နယ်မြေမှာတော့ စစ်ဆင်ရေးတွေက အမြဲတမ်း ရှိနေတာပါ။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်နေ သမျှတော့ တိုက်ပွဲတွေ လျော့သွားဖို့ မမြင်ဘူး။ အခု သူတို့ စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေတာ ကျနော်တုိ့ တပ်တွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေရာတွေမှာ ရောက်နေပြီ” ဟု ပြောသည်။
Posted by zau myu ong Lawhkawm at 4:12 PM
TeamViewer 7(CHAN LON)
System Repair(CHAN LON)
TVU player(CHAN LON)
ဂျာနယ် ၂ စောင်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆို...
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း ကောက်ပြီ(ir...
ENGLISH N SEN SHAPRAW YA AI SOFTWARE(JP tingsan)
FACEBOOK FAST DELETE MESSAGES(JP tingsan
SHARAI SHADING GA ( Sumla hkrung )
BROWSER N NAN HPE LANG YU GA. (JP tingsan)
INTERNET DOWNLOAD MANAGER - 6.10 ( Patch )[ JP tin...
TROJAN KILLER (jinghpawtingsan)
လေးဖက်နာ ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ(irrawaddy)
ရန်ကုန်ကားသင်္ချိုင်းမှာ ပိုက်ဆံပေး ရန်မလို
အမိန့်မနာခံသည့် ရှေ့တန်းတပ်မှူးများ ရှိလာ(myitkyina...
တပ်ပြေးကြောင့် ရွာလူကြီး ဖမ်းဆီးခံရ(myitkyina.blog...
မစ်ဆုံဒေသ၌ တရုတ် စက်ရုံများ တည်ရန် စီစဉ်နေ(irrawad...
LAWT PRU NA(jp kasa)
GALAU LA HPE MYEN NI KUMSHU YI GAW SAT MAKOI TAWN(...
GADAI SHUT AI RAI??
မြစ်ဆုံဆည် ဆက်ဆောက်နိုင်ရန် ကချင်အစိုးရအဖွဲ့ကို CP...
ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ညီမ ခြိမ်းခြောက်ခံရ
MYUSHADAN blogahkring dat hpe galai kau sai lam...
သူကြွယ်ကြီး George Soros ရဲ့ အတွေးအမြင်(freedomnew...
LOI YING MAKAU KAW GASAT(JP kasa)
တပ်မတော်သားများ ဘယ်လောက်ဘဲသေသေ၊ ငတေမာပြီးရော(JP ka...
YEN KAU RA AI KIA POST NI HPE ZUPZI BAI LU ZING LA...
Mastering CSS for Web Developers (akarphyoe)
ဘယ်သူ့အတွက် တပ်မတော်လဲ ???(irrawaddy)
ငယ်ပါ ကို သူခိုး က ဖြတ်ယူသွား(freedomnews)
အစိုးရ စစ်တပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆန္ဒမရှိဟု ဗိုလ်ခ...
ShangLawt Brang A Hkrun Lam
ပါကစ္စတန် တာလီဘန်အဖွဲ့ မြန်မာကို ခြိမ်းခြောက်(ဧရာဝတ...
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း Gtalk သုံးမရ(ဧရာဝတီ)
UHKA KANU SHE TAI MAYU AI UTAWNG KANU NI(jinghpawk...
HKRI KABA NI MARAI MANGA HPANG DE(jinghpawkasa)
တဖွဲ့တည်းကျန်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရဘူးလို့ ပြောလို...
HKA LI SANG HPAW GUP MAT AI A MATUT MANOI SHI GA
LAIZA GRUP YIN HTA GASAT(jinghpawkasa)
MA NI A NINGJA A TSAM MARAI II (jinghpawkasa)
Samsung galexy မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း(by:chanlon)
BALEN SHINGNI NAW KU HPAW (mani hpa sumla hkrung )...
MAU AI (mani hpa sumla hkrung )
MAGIC BURNING STUDIO ( KEY ) [jinghpawtingsan]
ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သွားစေတဲ့ ကိုယ်လုံးတီး တရုတ်အ...
ကြံစီဖန်တီး၍ မြစ်ကြိးနားမြို့မှ အမျိုးသမီးများကို ...
Super Anti Spyware (by:chanchanlon)
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေး ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ေ...
JUN 20 shiga kadun ni ( kinghpawkasa )
MA NI A NINGJA A TSAM MARAI(jinghpawkasa)
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို အမေရိကန် ဆန်ကူညီမည်(ဧရာဝတီ)
ကချင်ပြည်နယ်အရေး ကချင်အမတ်များ စပြောသင့်ဟု KIO ဆို...
ဗန်းမော်-ကသာ သွား ရှပ်ပြေး ရေယာဉ် တိမ်းမှောက
ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ယာယီတဲ ၂၅၀၀ ဆောက်ပေးမည်
ဒုက္ခသည်များကို ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း စည်းရုံး
အမေရိကန်က ကချင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်ကူညီမည်
SSPP/SSA နှင့် အစိုးရတပ်အကြား စစ်ရေးတင်းမာနေ ဒေသခံ...
စားသောက်ဆိုင်မိန်းခလေးကြောင့် စစ်ဗိုလ်နှင့် ရဲတပ်ြ...
G-Talk ကနေ သီချင်း ဖွင့်ပြရအောင်နော်
JAWM NINGHKAP SA WA GA
BUM SAWN BUM KAW GASAT
NALUNG KAW MHH NI SA HTIM GASAT(jinghpawkasa)
JULY 14, KNO A N DAU LAIKA
မြန်မာအစိုးရ စစ်ဆင်ရေး စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှု သတင်းတ...
အဖမ်းအဆီးကြောင့် ကချင်ဒုက္ခသည်များ ထိတ်လန့်
Jinghpaw Tingsan: PANGLAI HKA MAHKAWN ( Sumla hkr...
How to Change the E-mail Address Assosiated With y...
တရုတ်ပြည်တွင်းမှ ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများ ဖယ်ရန်မလိ...
Tsang (10) madang lu sharin ai Sara ra hpe hpyen y...
AVS VIDEO CONVERTER ( Full version ) Lit hkam: Ji...
ခံပြင်းခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ (Hti yu ga )
HPARE KAW GASAT PITUTSIT (2) HKRAT
တိုက်ကွက်ကို အကနဲ့ဖော်တဲ့ World Order
အာဏာရှင်တွေနဲ့ မပေါင်းလိုက်ရတာ နာတယ်
KIO နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်ဖို့ စစ်တပ်က အခရာကျတ...
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးသူများ သတိပြုစရာFriday, July 13...
MYEN HTE PAWNG NNA KIA HPE GASAT
MYEN DAP HTA MUNG SHAWA HPYEN LA NI LAW LAW LAWM
NWAN HKA HTE BUM TAWNG BUM LAPRAN KAW GAP
USB Disk Security 5.4
Delete Virus exe Folder မြန်မာလို
Ifile it မှဒေါင်းလော့ချနည်း
Cockroachondesktop Author : CHAN LON desktop မှာပ...